‘सत्य लेख्नु सर्वाेत्तम समाजसेवा’- विचार - कान्तिपुर समाचार
‘सत्य लेख्नु सर्वाेत्तम समाजसेवा’
काठमाडौँ — ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टस’ (आईसीआईजे) को संसारभर सयौं सदस्य छन् । विशेषगरी यी पत्रकारहरु आ–आफ्नो देशमा उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन् । यिनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेका छन् । आईसीआईजेले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने ‘मिट दि इन्भेस्टिगेटर’ स्तम्भले यस्तै क्रियाशील पत्रकारको चर्चा गर्छ । गत महिना पाकिस्तानी पत्रकार उमर चिमासँग आईसीआईजेकी एसिया प्रमुख सिल्ला अलेच्चिले कुराकानी गरेकी छन् ।
पाकिस्तानको ‘दि न्युज’मा काम गर्ने चिमाले ‘पानामा पेपर्स’मा सहभागी भई पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको विदेशमा लुकाइएको धनबारे खुलासा गरे । सार्वजनिक चासोको विषयमा खोजी समाचार लेख्ने चिमाले कैयौं धम्की खेपे, आक्रमणको सामना गरे । अपहरणमा समेत परे तर खोजी पत्रकारिता छाडेनन् । चिमासँंगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित तथा अनुदित अंश :
तपाईं किन र कसरी पत्रकारिता क्षेत्रमा आउनुभयो ?
१० कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि बुबाले मलाई मेरो भविष्यको योजनाबारे सोध्नुभयो । आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित ग्रामीण परिवेशमा हुर्केको व्यक्तिको लागि यो ठूलो प्रश्न थियो । ‘म नेता बन्छु कि, प्रहरी,’ मैले बुबालाई भनेँ, ‘जनताको सेवा गर्ने सपना छ ।’ राजनीतिज्ञ वा सरकारी कर्मचारीसँग मात्रै परिवर्तनकारी शक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो ।
लाहोरको पञ्जाव विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता अध्ययनका लागि भर्ना हुन्जेलसम्म पनि मेरो पत्रकार बन्ने योजना थिएन । म त एउटा डिग्री लिऊँ भनेर भर्ना भएको थिएँ । पढाइ सकाएपछि मैलै सरकारी सेवाको लागि तयारी थालेँ। सोही बेला मैले खर्च धान्न पत्रिकामा सम्वाददाताको रूपमा काम गर्न थालेको थिएँ ।
सुरुवाती दिनहरूमा नै मैले सूचनाको शक्ति कति हुँदोरहेछ भन्ने अनुभव गर्न पाएँ । मलाई के महसुस भयो भने शक्ति शक्तिशाली भनाउँदाहरूसँग होइन, उनीहरूले दबाउने सत्यसँग रहेछ । सत्य सार्वजनिक गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो समाजसेवा हो । पत्रकारिता उत्तर हो । यो अहिले मेरो चाहना र व्यवसाय दुवै भएको छ । म एक्कासी पत्रकार बनेंँ, तर जे भयो, ठिक भयो ।
पाकिस्तानमा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था के छ ? शक्तिशालीलाई उत्तरदायी बनाउन खोज्ने स्वतन्त्र पत्रकारले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू के–के हुन् ?
पत्रकारिता गम्भीर संकटमा छ । यसले कहिल्यै नभोगेको चुनौती भोगिरहेको छ । पहिला–पहिला पत्रकारलाई भौतिक सुरक्षाको चासो हुन्थ्यो । जेजसो भए पनि पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरू गतिशील र प्रतिरोधी खालका थिए । पटक–पटक गरी ३४ वर्ष शासन गरेको सैनिक अधिनायकसँग सञ्चार माध्यम निर्भीक रूपमा अडिए ।
तर अवस्था खराबबाट बहुतै खराबमा परिणत भएको छ । अहिले ठूलो सेन्सरसिप छ । केही अघिमात्रै पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक समाचार लेख्न सुझाव दिए । सरकारी नीतिहरूमा आलोचनात्मक रहने पत्रकारहरू पेसा छाड्न बाध्य छन् । जो पेसामा छन्, तिनको तलब घटिरहेको छ वा तलब ढिला पाउने समस्या छ । तर संघर्ष नै जीवन हो । पत्रकारहरूले लडाइँ जारी राखेका छन् । मूलधारका सञ्चार माध्यममा नआउने समाचारहरू न्युज वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् ।
पेसाका कारण तपाईंले कुनै धम्की खेप्नुभएको छ वा कुनै जोखिम अनुभव गर्नुभएको छ ? यदि छ भने त्यस्ता अवस्थाको कसरी सामना गर्नुभयो ?
पाकिस्तान जस्तो देशमा शक्तिको विरुद्ध सत्य बोल्दा मूल्य चुकाउनुपर्छ । यो पेसामा लाग्ने हरेक पत्रकारहरू जोखिमबारे अवगत नै छन् । कसैले दुव्र्यवहारको मात्रै अनुभव गरेका छन् भने बाँकीले हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ । म पनि त्यसैमध्ये एक हुँ ।
यो पेसामा लागेको चौथो वर्षमा मैले जोखिम व्यहोरेंँ । सन् २००४ मा मलाई सवारी दुर्घटनामा मार्न खोजिएको थियो । कारले दुईपटक ठक्कर दिएपछि हड्डी भाचिँदा म ६ महिना थला परेंँ । दुर्घटनापछि एक अपरिचितले फोन गरेर ‘आइन्दा सचेत बन’ भने । त्यसको ६ वर्षपछि म हतियारधारीको अपहरणमा परेंँ र यातना भोगेंँ ।त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण समय हो जस्तो लाग्छ ।
पत्रकारसँगै म एक पिता, पति, छोरा र कसैको भाइ पनि हुँ । मैले पेसा छाडे हुन्थ्यो भन्ने परिवारको चाहना थियो । धेरैले मेरो अपहरण नाटक हो भन्ने हल्ला फैलाए । मलाई धेरैपटक अपरिचितले पिछा गरेका छन् । म भयसँग परिचित भइसकेको छु । तर डराएर चुप बसेर म अरू पत्रकारको लागि नराम्रो उदाहरण बन्न चाहन्न । नत आफूलाई माफी दिन सक्छु ।
राष्ट्रियप्रति आतंकवाद प्राधिकरणले मसहित ५ पत्रकारलाई एक आतंकवादी समूहले हत्या गर्ने योजना बनाएको छ भनेर विश्लेषण गरेको थियो । मलाई मेरा एक स्रोतले यो विषयमा जानकारी गराए । तर अन्य पत्रकारहरू यो विषयमा अवगत थिएनन् । दुई महिनापछि प्रहरीबाट सुरक्षा आवश्यक पर्छ कि भनेर सोध्न फोन गरिएको थियो । तर मैले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेँ ।
तपाईंलाई मनपरेको आफ्नो अनुसन्धानबारे बताउनुस् न ?
प्रभावका हिसाबले कर र पानामा पेपर्सको अनुसन्धान सबैभन्दा माथि छन् । सन् २०१२ मा मैले सांसदहरूले तिर्ने करबारे रिपोर्टिङ गरेको थिएँ । करिब ७० प्रतिशत सांसदले कर तिरेका थिएनन् । पाँचमध्ये एक सांसदसँग त राष्ट्रिय कर नम्बर पनि थिएन । कानुनीभन्दा पनि यो नैतिक प्रश्न हो । जसले जनतामाथि कर लाद्छन्, उनीहरू नै कर तिर्दैनन् । कस्तो हास्यास्पद!
त्यो बेला आमचुनाव नजिकिंँदै गरेकाले यो विषयले एकदमै चर्चा पायो । सरकारले हरेक वर्ष दुईटा कर सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न थाल्यो । एक सांसद र अर्को नागरिक सम्बन्धी । कर सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने पाकिस्तान विश्वको चौथो देश बन्यो । यसअघि नर्वे, स्वीडेन र फिनल्यान्डले मात्रै यो अभ्यास गरेका छन् ।
पानामा पेपर्स अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित अनुसन्धान हो र म उक्त समूहमा सहभागी हुनपाएकोमा गर्वित महसुस गर्छु । यो अहिले पनि समाचारको विषय बन्छ । किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफका परिवारका सदस्य नै विदेशमा रहेका अफसोर कम्पनीका मालिकका रूपमा मुछिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री बाहेक अन्यको नामबारे चर्चा धेरै भएन । तर पाकिस्तानका ४ सय जनाको नाम विदेशमा कम्पनी स्थापना गरेर कर छल्नेमा मुछिएको थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अपवाद बाहेक अधिकांश धनाढ्यको नाम मुछिएको थियो, जसबारे छानबिन भएन ।
नवाज सरिफ प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य घोषित हुनुमा थोरै भए पनि पानामा पेपर्सको पनि भूमिका थियो । उनलाई अदालतले राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । सन् २०१५ मा पानामा पेपर्सको काम सुरु गर्दा यसको प्रभाव यस्तो हुन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको थियो ? तपाईंलाई केले अचम्मित बनायो ?
साँच्चै भन्नुपर्दा, त्यो बेलामा मलाई मिश्रित अनुभव भयो । जब पानामा पेपर्समा नवाज सरिफका परिवारका सदस्यको नाम आयो, तब मलाई यो प्रकाशित भएपछि के हुन्छ भन्ने अनुमान सहजै भएको थियो । पछि परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्यो । सरिफका परिवार कठघरामा उभिए– सुरुमा सञ्चार माध्यमको, पछि अदालतको ।
जवाफदेहिताको विषय चर्को गरी उठ्यो । आरोप र प्रत्यारोप समाचारका विषय बने । आरोपितले यसलाई प्रजातन्त्रमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय खतराको रूपमा चित्रण गरे र सरकारको विरोध गर्ने समय कुरिरहेको प्रतिपक्षले यसैलाई भेष बदलेर आएको भगवान भन्ठान्यो । यथार्थ भन्नुपर्दा आरोपित र उनका परिवार यसलाई झुटो सावित गर्न लागिपरेका थिए र प्रतिपक्षी यसलाई बढाइ–चढाइ गरिरहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक संकट रोक्न जब यो विषयमा हस्तक्षेप गर्‍यो, तब शक्तिशालीलाई उत्तरदायी बनाउने आशाले आकाश छोयो । तर अनुसन्धानका नाममा छानबिन समिति बनाइयो, त्यससँगै यो प्रक्रिया दूषित भयो । छानबिन समितिमा दुई उच्च तहका सैनिक अधिकृत पनि समावेश थिए, जसको आर्थिक विषयको अनुसन्धानमा कुनै अनुभव नै थिएन ।
सेना र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सहज नभएकाले अनुसन्धान समितिमा सैनिक अधिकृतको संलग्नतालाई सबैले चासोका साथ लिए । सर्वोच्च अदालतले सरिफलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अयोग्य सावित गर्दा पानामा पेपर्समार्फत सार्वजनिक भएको तथ्यको आधारमा गरेको थिएन । उनी संविधानको भावना अनुसार प्रधानमन्त्री हुन सही र असल व्यक्ति होइनन् भनी सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो ।
उनलाई आफ्नो तलब सार्वजनिक नगरेको भनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट अपदस्थ गरिएको थियो । तर उनले आफूले तलब नबुझेको दाबी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले सरिफलाई खलनायकभन्दा पनि पीडित बनायो । शक्तिशालीलाई उत्तरदायी बनाउने आशा
समाप्त भयो ।
पानामा पेपर्सको अनुसन्धानले तपाईंको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ ?
पानामा पेपर्स मेरो सन्दर्भ विन्दु बनेको छ । यो मेरो परिचयको स्रोत हो । यसले मेरो लागि तगारो पनि खडा गरेको छ । अहिले पाठकले मेरो समाचारलाई पानामा पेपर्ससँग तुलना गर्छन् । एक पटक उच्च सरकारी अधिकारीले आफ्ना कनिष्ट कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहारको बारेमा समाचार लेखेपछि उनले मलाई गाली गरे । ‘एकातिर तपाईंले पानामा पेपर्सजस्तो खुलासा गर्नुभयो, अर्कोतिर मेरोबारे रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कस्तो स्तर खस्किएको ।’
पानामा पेपर्सको कारण मैले राम्रो स्रोतहरू पनि कमाएँ । एक दिन मलाई अर्को व्यक्तिसँग परिचय गराउँदा एक जनाले भने–उहाँ त्यो व्यक्ति हो, जसले नवाज सरिफको पद खुस्काइदिनुभयो । त्यो बेलामा मलाई असहज अनुभूति भयो । यदि सरिफमाथि निष्पक्ष छानबिन भएको भए म त्यस्ता प्रशंसा सहर्ज स्वीकार्थें ।
तपाईंले पेसा सुरु गर्दा ट्विटर र यस्ता सामाजिक सञ्जाल थिएनन् । अहिले ट्विटरमा तपाईंका फलोअर करिब १० लाख छन् । कहिलेकाहीं तपाईं ट्रोलबाट दुव्र्यवहारको सिकार बन्नुहुन्छ ।
ट्विटरजस्ता प्लेटफर्मले तपाईंको पेसालाई कस्तो परिवर्तन गराएको छ ?
म सबैभन्दा धेरै ट्रोल खेप्ने पाकिस्तानी पत्रकार हुँ भन्दा अत्योक्ति नहोला । ट्विटर अडिटले सार्वजनिक गरे अनुसार मेरा आधाभन्दा बढी फलोअर नक्कली हुन् । ममाथि नक्कली एकाउन्ट बनाएर ठूलो समूह लागेको छ । सक्कली प्रयोगकर्तालाई दिग्भ्रमित पार्न यस्ता नक्कली ट्विटर एकाउन्टका माध्यमबाट विभिन्न हल्लाहरू फैलाइन्छ । म भ्रष्ट पत्रकार हुँ भन्ने त्यसमध्ये एउटा हल्ला हो । यस्ता एकाउन्टले कपोकल्पित समाचारहरू पनि बाँड्छन् । मैले नवाफ सरिफसँग दुबईमा अपार्टमेन्ट लिएको भन्ने हल्ला त्यसै मध्येको एक हो । कपोलकल्पित समाचार पनि साँच्चिकै लाग्नेगरी सार्वजनिक गरिएको हुन्छ । मेरो बारेका समाचार नभएको भए मै पनि पत्याउँथेँ होला ।
अर्को समाचारमा मेरो १८ वर्षको छोरी लुभा चिमा रहेको हल्ला चलाइयो । वास्तवमा, छोरी त कुरै छाडौं, मेरा कोही सन्तानको पनि उमेर १८ वर्ष छैन । मैले यो कुरा धेरैपटक ट्विटरमा लेखे पनि सबैलाई बुझाउन सकेको छैन ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०८:५५
यातायातमा दलालकै बिगबिगी
माघ २६, २०७५ प्रशान्त माली
ललितपुर — सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीको एउटा टोली यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा पुग्यो । दलालको चलखेल बुझ्न परिचय लुकाएर गएको टोलीले कार्यालय अघि भेटिएका दलालसित सवारी अनुमतिपत्र बनाइदिन अनुरोध गर्‍यो । दलालले पनि ग्राहक ठानेर नक्कली होइन सक्कली नै बनाइदिने भन्दै १५ हजार लाग्ने बताए ।
बिचौलियाको आरोपमा यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट पक्राउ परेका युवाहरू  । तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर
लगत्तै पक्राउ परेका सर्लाही हरिवन घर भई नख्खु बस्ने राजदीप लामाले बयानमा सवारी प्रशिक्षण दिने, अनुमतिपत्र मिलाइदिने र सवारी दर्ता किताबको नवीकरण गर्ने गरेको स्वीकारे । त्यसपछि सरकारी वकिलमार्फत सार्वजनिक हितविरुद्ध चलाइएको मुद्दा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा विचाराधीन छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रको नेतृत्वमा मंसिर ७ मा गएको टोलीले ओखलढुंगा घर भई कुसुन्ती बस्ने अर्जुन विकलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले विकलाई सेवाग्राहीसँग लेनदेन गरिरहेको अवस्थामा भेट्यो । दलाल पक्राउपछि कार्यालयको स्थिति सामान्य बन्यो । लगत्तै भोलिपल्टबाट दलालको चलखेल उस्तैरह्यो । चार दिनपछि मंसिर ११ मा लगनखेल बस्ने किशोर बस्नेत पक्राउ परे । विक र बस्नेतविरुद्ध चलाइएको मुद्दा पनि प्रशासनमा विचाराधीन छ ।
यी कार्यालयमा दलालको चलखेल कति हुन्छ भन्ने सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । प्रहरीमा सवारी अनुमतिपत्रमा आर्थिक घोटाला र चलखेलको गुनासो धरै आउन थालेपछि पुस १२ मा थप १० जना बिचौलियालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा खेप्नेमा गुल्मी घर भई बानेश्वर बस्ने शिवलाल बस्नेत, सानेपा बस्ने सरिन बस्नेत, भारत विहारका सरोज गुप्ता, ताप्लेजुङका राजदीपप्रकाश लिम्बू, भोजपुरका समुयल राई, नुवाकोट विदुरका रोहण थापा, काभ्रेका दीपक घोडासैनी, कुसुन्ती बस्ने रविन खड्का, ओखलढुंगाका सुरज दगाले र वीरगन्जका विनेश बोहरा छन् ।
दलालले अति गर्न थालेपछि कार्यालयमा बुधबार मात्रै प्रहरीले छड्के जाँच गरी ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी जाँदा बिचौलिया कार्यालयबाट भागभाग भएका थिए । प्रहरीले कार्यालयअघि राखेको फोटोकपी मेसिन, दर्ता फारमलगायत सामान बरामद गरेको थियो ।
अहिले प्रहरीले पक्राउ परेकालाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट घर भई ग्वार्को बस्ने रमेश रसाइली, भक्तपुरका दीपेन्द्र चौगुठी, भोजपुरका निगम राई, दोलखाका सूर्य तामाङ, बारा निजगढका लालबहादुर गोरे, सप्तरी कञ्चनपुरका कैलाशमुनि नेपाल, धादिङका यादव भेटवाल, काभ्रे खानी गाउँका देवेन्द्र थिङ, काठमाडौं चन्द्रगिरीका हीराप्रसाद पौडेल छन् । कार्यालयमा अत्यधिक चलखेल हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि व्यापक छानबिन थालेको छ ।
डीएसपी मिश्र भन्छन्, ‘पक्राउ गर्न सुरुमा सिभिलमा खटिएका प्रहरीले साता दिनसम्म सूक्ष्म अध्ययन गरेका थिए ।’ उनले पक्राउ पर्दा कोही बिचौलिया सेवाग्राहीको कागजात बोकेर लाइनमा बसेको अवस्थामा त कोही लाइसेन्स फाँट र कर्मचारीको कार्यकक्षमा थिए । ‘दलालले कम पढेलेखेका सेवाग्राहीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर एउटा लाइसेन्सको १२ देखि १५ हजारसम्म लिने गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘लिखित पास भएर पनि ट्रायलमा फेल भएका व्यक्तिहरू दलालको सम्पर्कमा जाने गरेका छन् ।’ उनले दलालको चलखेल हटाउन प्रहरीलाई नियमित परिचालन गरेको बताए ।
‘अब यातायातमा गुन्डागर्दी चल्दैन,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) वाग्मती एकान्तकुनाका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले सेवाग्राही वा बिचौलिया पहिचान नहुने भएकाले रोक्न गाह्रो परेको दाबी गरे । ‘सेवाग्राही आफैं सक्षम हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा हामी सुशासन चाहन्छौं ।’ उनले कार्यालय गेटमा बस्ने बिचौलियालाई हटाउन पटक–पटक नगर प्रहरीलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘तर यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार सवारी अनुमतिपत्र बनाउने काम दलाल र केही कर्मचारीबीच मिलेमतोमा हुने गरेको छ । यस्तो कार्यमा राजधानीका केही ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकसमेत संलग्न छन् । कार्यालयमा चलखेल कम गर्ने उद्देश्यले सीसीक्यामरा राखिएको छ । तर सबै निष्क्रिय छन् । प्रमुख उप्रेतीले कार्यालयमा आएको महिना दिन मात्र भएकाले त्यति जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘सीसीक्यामरा मिलाउन सप्लायर्सलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने । कार्यालय नियमानुसार शुक्रबार ३ बजेसम्म खुल्नुपर्छ । तर कान्तिपुरकर्मी पुग्दा ३ नबज्दै अधिकांश कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् ।
पक्राउ परी मुद्दा चलाइएका दलाल सामान्य धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । हालै पक्राउ परेका टोलीबाहेक अन्य सबै ५ देखि १० हजार धरौटीमा प्रशासनले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्ने गरी छुटेका हुन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, ०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ११८ मा कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न नहुने प्रावधान छ । उपदफा २ मा कानुनविपरीत काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रशासनले भने सामान्य धरौटीमा छुटाउने गरेको छ । अहिलेसम्म कसैलाई कैद सजाय भएको छैन । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशीले कैद सजाय तोक्न पर्याप्त प्रमाण नहुने गरेको दाबी गरे । ‘कार्यालयमा सामान्य खालका मुद्दा आउने भएकाले एकैपटक जेल पनि पठाउनुभएन,’ उनले भने, ‘यस्तै गल्ती पटक पटक दोहोर्‍याएमा जेल सजाय पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले पुराना मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहने गरेको बताए । ‘यातायात कार्यालयमा सकेसम्म बिचौलिया निरुत्साहित गर्छौं,’ उनले भने, ‘क्रमश: सुधार गर्दै लैजानेछौं ।’
दलालले १० रुपैयाँमा सजिलै पाउने एउटा दर्ता फारमको ३० देखि ५०, लिखित
परीक्षाको नतिजा जानकारी गराइदिने भन्दै ५०, लिखित परीक्षामा आउने प्रश्नावली भन्दै केही प्रश्नहरू दिएर ५ सयदेखि हजारसम्म लिने गरेका छन् । बजारमा नक्कली स्मार्टकार्ड लाइसेन्स पनि देखा पर्न थालेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले केही महिनाअघि सातदोबाटोबाट दुई जनालाई नक्कली स्मार्टकार्ड लाइसेन्ससहित पक्राउ गरेको थियो । ट्राफिक चेकिङ गर्ने क्रममा सातदोबाटोबाट निर्माण सामग्रीबोकेको बा४ख ७१२९ नम्बरको मिनीट्रक चालक मकवानपुरका प्रवीन स्याङतान र यात्रु बाकेको बा५ख २८५४ नम्बरको मिनीबस चलाक कालिकोटका चक्रे नेपाली पक्राउ परेका थिए ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०८:४९